Qiimaha lagu heli karo xiddiga bartilmaameedka u ah kooxda Manchester City ee Thomas Partey oo la shaaciyey – Gool FM
(Madrid) 22 Maarso 2019. Waxaa la shaaciyey lacagaha lagu burburin karo heshiiska ciyaaryahanka khadka dhexe ee Thomas Partey kula joogo kooxda Atletico Madrid.
Thomas Partey ayaa heshiiskiisa kooxda Atletico Madrid waxaa la shaaciyey in lagu burburin karo adduun dhan 43 milyan oo gini.
Waxa uu Thomas kooxda Atletico Madrid ka mid ahaa tan iyo sanadkii 2012-kii, isagoo u soo ciyaaray kooxda labaad ee B intii u dhaxaysay 2013-kii illaa 2015-kii, ka hor inta aan loo soo dallacsiin kooxda waa weyn.
25-sano jirkaan ayaa 131 kulan u saftay kooxda ka dhisan caasimadda Spain tartammada oo dhan, waxaana uu dhaliyey 11 gool isagoo u sameeyey 10 caawin.
Horraantii todobaadkan waxaa soo baxay warar soo jeedinayey in kooxda Manchester City ay xiisaynayso saxiixa xiddiga xulka qaranka Ghana, kaasoo labo gool dhaliyey saddex kalena caawiyey 24 kulan oo uu ciyaaray kulammada horyaalka La Liga xilli ciyaareedkan.
Sida ay warinayso Jariiradda Marca, ciyaaryahan Thomas ayaa heshiiskiisa kooxda Atletico Madrid lagu burburin karaa adduun dhan 43 milyan oo gini, taasoo la filayo inay soo dhoweyso xiisaha looga qabo suuqa kala iibsiga ee xagaaga.
Kooxda Manchester City ayaa haatan baadi-goobeysa bedelka waqtiga dheer ee ciyaaryahankeeda Fernandinho.
Lionel Messi oo tan iyo Koobkii Adduunka caawa dib ugu soo laabanaya xulkiisa Argentina